‘तिमीसँग माया गर्दा...’- फिचर - कान्तिपुर समाचार
‘तिमीसँग माया गर्दा...’
अन्तरजातीय बिहे गरेका दुई सिर्जनशील कलाकारको प्रेमकथा
श्रावण २९, २०७७ गोकर्ण गौतम
काठमाडौँ — सुन्धारास्थित थिएटर मलमा नाटक ‘उपियाँको निबन्ध’ रिहर्सल हुँदै थियो । तरह–तरहका पहिरन चाहिन्थ्यो, निर्देशकको चाहनाबमोजिम पहिरन बनाउन कलाकार आफैं खटिरहेका थिए । एउटा कपडा काटकुट पारेर नयाँ बनाउनुपर्ने भयो तर कहाँ पो सिलाउने ?
त्यतिखेरै कलाकारमध्ये एक लक्ष्मी बर्देवाले भनिछन्, ‘मेरो घरमा बुबाको टेलरिङ छ । म सिलाउन भन्छु ।’ अरू कलाकारले खासै अनौठो मानेनन् तर जीवन भट्टराईको मनमा कौतूहलता पलायो, ‘बर्देवा भनेको त पक्कै दलित (परियार) होइन होला । त्यसो भए घरमै बुबाको टेलरिङ कसरी ?’ फेरि एकछिनपछि आफैंसँग भनेछन्, ‘टेलरिङको व्यवसाय मात्र होला ।’ जीवनले लक्ष्मीबारे यत्तिविघ्न घोत्लिनुको कारण थियो, ‘त्यतिबेला उनी लक्ष्मीलाई मन पराउन थालिसकेका थिए । तर, दलित नै रहिछन् भने संकट पर्थ्यो, उनी त उपाध्याय बाहुनको छोरो ।’
जीवनको शंका सही थियो । लक्ष्मी दलित समुदायकै थिइन्, उनीसँग माया गाँसेपछि अनेक उल्झनले लपेटिरह्यो । तर, प्रेम यति प्रगाढ बन्दै गयो कि जातको तगारोले कहिल्यै छेक्न र रोक्न सकेन ।
चार वर्ष बित्यो । हालैको झरी परेको एक बिहान अनामनगरमा लक्ष्मी र जीवन एकसाथ भेटिए, अहिले सहकर्मीबाट पतिपत्नी बनिसकेका छन् । त्यतिबेला नाटक मात्र गर्थे, फिल्म हुँदै अहिले म्युजिक भिडियोमा व्यस्त हुन थालेका छन् ।
जेल पनि सहुँला
नेल पनि सहुँला
तिमी हुन्छ मात्रै भन
दुनियाँको झेल पनि सहुँला
मेलिना राई र बलबहादुर राजवंशीले गाएको यो गीत आजकल खुब लोकप्रिय छ । गीतको मर्मलाई भिडियोमा मन छुने शैलीमा उतारिएको छ । अभिनय छ, जीवन र लक्ष्मीको । निर्देशन पनि उनीहरूकै । ‘बिहे गरेपछि यो गीत खेलियो तर हामीले यस्तै सोचेर बिहे गरेका थियौं, त्यसैले यो गीत हाम्रै लागि लेखिएको जस्तो लाग्छ,’ जीवनले मुस्कुराउँदै सुनाए । भिडियोमा जीवन स्कुलको पाले हुन्छन्, लक्ष्मीचाहिँ शिक्षिका । उनीहरूले वास्तविक जीवनमा जातीय विभेदको राप सहनुपर्‍यो, भिडियोमा वर्गीय विभेद । लक्ष्मी भन्छिन्, ‘सम्बन्धमा समझदारी र एकअर्कामा सम्मान छ भने जस्तै व्यवधानले रोक्न सक्दैन । हाम्रो अनुभवले त्यही भन्छ, भिडियोमा पनि त्यस्तै देखाउने प्रयास गरेका छौं ।’
यति घनीभूत प्रेम कसरी सुरु भयो ? यो प्रश्नले दुवै पुलकित बने । र, मण्डलाका ती दिनहरू सम्झिए, जतिबेला उनीहरूको प्रेम टुसाउन थाल्यो ।
कलाकार नै बन्छु भनेर जीवन हेटौंडाबाट काठमाडौं आएका थिएनन् । तर, यहाँ आएपछि जब नाटकलाई नजिकबाट नियाल्न पाए, उनलाई लागेछ, ‘जीवनमा मैले गर्नुपर्ने यही हो ।’ नाटकमा उनले आफूलाई पाए । त्यसपछि अभिनय प्रशिक्षणका लागि मण्डलामा हाजिर भए । त्यहाँको चौथो ब्याच । लक्ष्मीचाहिँ तेस्रो ब्याच पास आउट थिइन् । जब लक्ष्मीलाई जीवनले देखें, हक्की र निडर लाग्यो । बोल्न कति पनि नडराउने । जीवन
ठ्याक्कै उल्टो, अन्तरमुखी स्वभावको । तर, अन्तरमनको भोगाइ उस्तै–उस्तै, दुवै अभिनय कर्ममा तल्लीन थिए तर भनेजस्ते मौका मिलिरहेको थिएन । अझ जीवनलाई त काठमाडौंमा बस्नै धौधौ थियो । लक्ष्मीको घरै यहीं भएकाले खाने–बस्ने संकट थिएन ।
कुनै नाटकको शो सकिएपछिको साँझ थियो त्यो । चिनजान भर्खरै भएको थियो । नाटक सकेर लक्ष्मीलाई हिँडेरै अनामनगरबाट कालोपुल जानुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसैले नाटक सक्नासाथ हत्तारिँदै निस्कने गरेको जीवनले नियालेका रहेछन् । एक दिन आँट गरेछन्, ‘तपाईं एक्लै हो भने म पुर्‍याइदिन्छु नि ।
‘तिमीसँग बाइक छ ?’ लक्ष्मीले सोधिछन् ।
‘छैन, म हिँडेरै पुर्‍याइदिन्छु,’ जीवन थोरै लजाए । लक्ष्मी हाँसिन् तर नाईं भनिनन् ।
लक्ष्मी सम्झिछिन्, त्यो गोधूलि साँझमा जीवन धेरै बोले, उनले सुनिन् मात्र । जीवनतिर फर्केर हाँस्दै भनिन्, ‘पहिलो हिँडाइमै केटोले कविता सुनाउन भ्यायो ।’ जीवन पनि के कम ? भनिहाले, ‘भोलिपल्टदेखि त तिमी पनि सुनाउन थालिहाल्यौं नि ।’ हिँड्दै, कविता सुनाउँदै । क्या काइदा ! लक्ष्मीलाई कालोपुल पुर्‍याउने । अनि, एक्लै घट्टेकुलो फर्कने । जीवनको दैनिकी बन्न थाल्यो । जति धेरै भेट, उतिधेरै सामीप्यता । एकदिन लक्ष्मीलाई कसैले सोध्यो, ‘तिम्रो ब्वाइफ्रेन्ड छ ?’ उत्तर के थियो त ? भन्छिन्, ‘छ/छैन केही भनिनँ तर त्यतिबेला मलाई जीवनको अनुहार याद आयो ।’ उनी आफैंसँग प्रस्ट भइन्, जीवनलाई माया गर्न थालेछु । र, उनले चाल पाइसकेकी पनि थिइन्, जीवनले पनि माया गर्छन् । तर, जीवन कति घुसघुसे भने, व्यक्त गर्दै/नगर्ने ।
यतिबेलासम्म जीवनलाई लक्ष्मीको जात थाहा थिएन, कहिल्यै कुरा भएन । लक्ष्मीलाई लागेछ, अरू साथीबाट जीवनले थाहा पाइसकेका छन् । ‘उपियाँको निबन्ध’ को प्रसंग यही समयको हो ।
जीवनले ढाँटेनन्, ‘लक्ष्मीको अचाक्ली माया लाग्थ्यो तर जब घर सम्झन्थे, अत्तालिन्थें ।’
लक्ष्मीले पनि ढाँटिनन्, ‘जीवन बुबाआमाको धेरै कुरा गर्थ्यो । मसँग बिहे गरेपछि बुबाआमासँग टाढिनुपर्छ, जुन म चाहन्नथें । त्यसैले म आफैं साइड लाग्नुपर्छ भन्ठान्थें ।’ तर उही, नपर्नु प्रेम परिसकेको थियो, आँधी आउँदै छ भन्ने पूर्वाभास हुँदा पनि अलग हुन चाहेनन्/सकेनन् । यता करिअरको चिन्ता, उता परिवारको । दुवैका लागि सकसपूर्ण थिए ती पलहरू ।
साथी सर्कलमा उनीहरूले प्रेम लुकाएनन्, सँगै बस्न थाले, घरमा भने थाहा थिएन । एक दिन आमासँग जीवनले सबथोक भने, सुरुमा आमाले पत्याइनन् । ‘त्यसपछि आमा रुन थाल्नुभयो । हामी यही समाजमा बस्नुपर्छ, त्यसो नगर भन्नुभयो,’ उनले भावुक हुँदै सम्झिए, ‘मैले मान्छे राम्रो छ, उसैसँग बिहे गर्छु भनें ।’ यता, उनीहरूको प्रेम कसिलो हुँदै छ । उता, परिवारमा कोलाहल मच्चिँदै छ ।
केही दिनपछि जीवनका बुबाले फोनमा लक्ष्मीलाई ‘जीवनलाई छोडिदेऊ’ भनेर आग्रह गरे । लक्ष्मीले ‘म छोड्न सक्दिनँ’ भनिदिइन् । अत्ति भएपछि बुबाआमाको चित्त बुझाउन जीवन घर गए । लक्ष्मीका अनेक गुण र एकअर्काले गर्ने माया सुनाए । तर, अहँ ! कठोर जातीय संरचनामा बाँधिएका र समाजको डरले सताएका बुबाआमाले कान्छो छोरोको अनुरोध मान्दै–मानेनन् । जीवनले हार खाए । त्यहीबेला लक्ष्मीले भनिछन्, ‘सधैं घरबाट अलग्गिएर बस्न सकिन्नँ । बरु आ–आफ्नो बाटो लागुम् ।’ जीवनले मानेनन्, बिहे गर्ने अड्डी कसे । लक्ष्मी पनि कहाँ छोड्न सक्थिन र ?
त्यो दिन पनि आयो, जीवनले लक्ष्मीको सिउँदो सजाए । २०७५ माघ २७ गते मन्दिर गए, भगवान्लाई साक्षी राखे, साथीभाइ पनि थिए, तर जीवनको घरपट्टिका कोही थिएनन् ।
जीवन फुरुंग थिए– आफूले माया गरेको मान्छे पाए ।
जीवन उदास थिए– परिवारबाट टाढिनुपर्‍यो ।
लक्ष्मी मक्ख थिइन्– माया गरेको मान्छे पाइन् ।
लक्ष्मी निराश थिइन्– आफूसँग नाता गाँसेपछि परिवारसँग जीवनको नाता तोडियो ।
भनुँन, दुवैका लागि हाँसो र रोदनको मिश्रण ।
तर, सुखद के भइदियो भने, बिहेपछि उनीहरूको करिअरले गति लियो । ‘कागजपत्र’, ‘सेल्फी किङ’, ‘चंगा चेट’ लगायतका फिल्ममा सँगै काम गरे । ‘प्रेमगीत ३’ र ‘चपली हाइट ३’ प्रदर्शन हुनै बाँकी छ । लक्ष्मीले ‘बुलबुल’ बाट उधुम प्रशंसा पाइन् । म्युजिक भिडियो त सँगै खेल्ने मात्र होइन, निर्देशन पनि गर्न थाले । ‘नशा,’ ‘रुमालै चिनो,’ ‘आएन खबर,’ र ‘रुँदारुँदै हाँसेको’ आदि–आदि । ‘जेल पनि सहुँला’ पछि उनीहरूको माग बढेको छ ।
डेढ वर्ष भयो, जीवन घर जान नपाएको । बुबाआमासँग पनि खासै सम्पर्क हुन्न । नातेदारहरूको कुरा सुन्दा लाग्छ, उनले ठूलै गल्ती गरेका छन् । लक्ष्मीसँग बिहे गरेकोमा कहिलेकाहीँ पछुतो लाग्दैन ? अनेपक्षित प्रश्न थियो सायद । त्यसैले केही समय मौन भए, त्यसपछि लक्ष्मीतिर फर्केर गुन्गुनाए :
आफन्तहरू टाढा भए
तिमीसँग माया गर्दा
तर, सिंगो संसार पाएँ
रमेश नामहाङ राईले लेखेको यस गीतमा यो जोडीको अभिनय र निर्देशन छ ।
-तस्बिरहरु : दीपक केसी/कान्तिपुर
प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ ११:०७
बुटवल कोरोना अस्पतालमा मृत्यु भएका युवाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ
श्रावण २९, २०७७ सन्जु पौडेल
तिलोत्तमा, रुपन्देही — बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा बुधबार बिहान ज्यान गुमाएका २५ वर्षीय युवा प्रदीप तेलीको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका तेलीलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि मंगलबार बुटवलस्थित अस्पताल ल्याएर भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो । बुधबार साँझ आएको पीसीआर रिपोर्टमा तेलीलाई कोरोना संक्रमण नदेखिएको अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाले बताए ।
थापाका अनुसार तेलीको मिर्गौला फेल भएको थियो । तेली यही साउन २४ गते भारतको मुम्बईबाट घर आएका थिए । आउँदा नै बिरामी परेका उनले स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराएका थिए ।
श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिनुका साथै कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि उनलाई कोरोना अस्थायी अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो ।
प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ ११:००
‘पापीहरुले मेरी छोरीको बलात्कार गरे, पञ्‍चायतले हत्या’
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा जनगणना गर्ने के छ तयारी ?
शिखरबाट ‘बेसक्याम्प’ तिर नेकपा विवाद
कहिले कहिले रोकियो इन्द्रजात्रा ?
'फ्लुटमास्टर' बन्‍ने तिलस्मी चाहना
महामारीमा किन विज्ञानकै भर पर्नुपर्छ ?
अपडेटः शनिबार, ३ असोज, २०७७ । २० : २० बजे
स्वनिगः या सहलह
आहुति आश्विन ३, २०७७
नेवार भाषामा वाग्मती उपत्यकाको नाम हो- स्वनिगः । यस रचनामा त्यही स्वनिगःको सत्त्वबारे सहलह अर्थात् सल्लाह गर्न खोजिएको छ । इतिहासलाई केलाउँदा स्वनिगः अर्थात् वाग्मती...
टीका थापेको भत्ता
शरच्चन्द्र वस्ती आश्विन ३, २०७७
गोजीबाट एउटा कागज झिकेर मलाई दिंदै उसले भन्यो, ‘यसको भाषा मिलाइदे न यार !‘यो के हो ?’ मैले सोधें, ‘फेरि के गोलमाल गर्न लागिस् ?’
‘सर्पसँग केको डर ?’
केआर खम्बु आश्विन २, २०७७
सर्प शब्द सुन्नासाथ हाम्रो मस्तिष्कमा एउटा चित्र सलबलाउँछ– हात–खुट्टाविहीन सामान्य रूपमा घस्रेर हिँड्ने एक जीव । सरीसृप वर्गको यसको शरीर लाम्चो डोरीजस्तो र कत्लाले ढाकिएको...
चुनावको होइन, पुस्ताको चिन्ता
मीता सिंह आश्विन २, २०७७
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक योद्धा गणेशमान सिंह त्यस्तो संघर्षशील नेता हुनुहुन्थ्यो, जसको इतिहास पढ्दा आजको पुस्ताले नेपालको नागरिक हुनुमा गौरव गर्छ । उहाँले प्रजातन्त्रका लागि १९९७...
संविधानका पाँच वर्ष
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम आश्विन २, २०७७
संविधान जारी भएको पाँच पुगेर अब छ वर्ष टेक्दै छ । नेपालबाट राजा, राजशाहीको अन्त्यसँगै लेखन प्रारम्भ भएको वर्तमान संविधान पाँच वर्षपूर्व २०७२ असोज ३ मा...
टीकाराम भट्टराई आश्विन २, २०७७
विश्वराजनीतिलाई चकित पार्ने बैसट्ठी–त्रिसट्ठीको जनक्रान्तिलाई संस्थागत गर्दै गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद–उन्मुख अर्थव्यवस्थाको संवैधानिक प्रबन्ध गरेको नयाँ संविधानका विगत पाँच वर्ष उथलपुथलपूर्ण रहे ।...
विदेश पुर्‍याइएका मूर्तिबारे सरकार मूर्तिजस्तै
सम्पादकीय आश्विन २, २०७७
नेपालबाट हाकाहाकी चोरिएका वा संयोगवश हराएका मूर्ति–सम्पदाहरूको खोजबिन तथा अभिलेखीकरण गर्ने क्रममा पुरातत्त्वविद् लैनसिंह बाङ्देलले सन् ८० को दशकमा भन्ने गरेको एउटा उक्ति छ, ‘नेपाली...
दिशाहीन समाजवादको पटकथा
नारायण ढकाल आश्विन १, २०७७
अधिकांश असफल सरकारका नाइकेहरू भन्ने गर्छन्— हाम्रो समयमा धेरै राम्रो काम भएको थियो तर सञ्चारक्षेत्र र आलोचकहरूले यसलाई देख्न कन्जुस्याइँ गरे । यस्तो दाबी गर्नेमा...
काठमाडौं उपत्यकालाई अलग्गै प्रदेश किन नबनाउने ?
खिमलाल देवकोटा आश्विन १, २०७७
नेपालको संविधानअनुसार पहिलोपटक २०७४ फागुन ३ मा संघीय सरकार गठन भयो । यसै अवधिमा पहिलोपटक प्रदेश सरकारहरू पनि गठन भए । संघीय र प्रदेश सरकारहरू गठन हुनुभन्दा...
चन्द्रकिशोर आश्विन १, २०७७
टाकुराबाट कुरुक्षेत्रको युद्ध हेरिसकेपछि टाउको काटिएको बर्बरीकले भनेको थियो, ‘सम्पूर्ण महाभारतमा मैले एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक मर्दै र मार्दै गरेको देखें । तिनी थिए– कृष्ण ।’ यस कथनको...